mero, Author at Mero Pradesh - Page2of 132
तपाई सग निश्चित पुजी छ । तपाइलाई घर बनाउनु छ। ठुलो बंगला बनायर बाहिर बाट हेर्दा धनि देखिने कि ? निश्चित पुजी बाट आवश्यक संरचना, सामग्री र सुबिधा सम्पन्न गृहस्थी बसाउने ? अर्को कुरा तपाई सग पुजी छ। तपाईको घर बनाउने सोच छ । तपाई भयको जग्गामा बसेर सिदै खाल्टो खन्न थाल्नु हुन्छ कि, घर […]